Okuhlobisa odongeni design udlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni emakamelweni angaphakathi. Kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ziklanywe ngendlela emangalisayo futhi original kwaba, kungakhathaliseki ukuthi ifenisha, elinemishwe ukunethezeka izesekeli okukhethekile noma ukuhlobisa indlu / ifulethi, izizwe inesizungu izindonga angenalutho ingozi okuqinile ayedlula isithombe jikelele idyll kwansuku zonke. lokubhalela olukhuni ngeke zivuse imicabango zangaphakathi akuphelele, okubangela izivakashi ukukhanyiselwa bazizwe movie awunazo imibala eyisisekelo. izindonga ezihlotshiswe kahle hhayi kuphela ukunikeza design ephelele, kodwa futhi uhogele Igumbi fresh, ethakazelisayo, ekwamukeleni emkhathini. Namhlanje bakutshele indlela ukuhlobisa izindonga ngezandla zakhe, ngaphandle asebenzise Abaklami ezibizayo ukusiza.
Ngokwakhe umklami, noma imibono ezithakazelisayo
Kudala futhi kuze kube phakade Ngishoné lwanyamalala ngalezo zikhathi lapho udonga senziwa ukuhlobisa mata ka wonke bobunjwa nemibala. Ngingena ayo amasha, original design ezihilela imidwebo, murals, imidwebo, izithombe kanye yezandla. Izindonga, ukukhathala esithile bheka isiyaluyalu imibala manje mangaza nemiklamo engavamile njengalena, eboshiwe futhi amehlo ekubambeni, agqamile okuyisidina, kumnandi futhi ibe nobuhlakani. Interior izindonga benza okungaphezu kwalokho okujwayelekile, abe ngobuciko design art.
Cabanga indlela ukuhlobisa udonga ngezandla zabo ngokushesha, kodwa yokuqala.
Umdwebo Indwangu futhi efekethisiwe
Indlela "okungavamile ongavamile" futhi nje kancane lokudala ukukusiza wenze okukhethekile odongeni design ngokushesha, futhi okubaluleke - bebodwa. Ngaphansi lo mqondo kuhlanganisa zonke endlini. Ngokuhamba kukhona izinsalela izindwangu, ukwakheka amahle, izingubo ezingadingekile. Kwangezikhathi ngamaphetheni uthathe tikwele eziningana, okuyinto awashintsheki ozimele futhi hung ezindongeni. I izingoma kungadalwa ngezinto ezahlukene, efanayo imibala, noma lendwangu okufanayo iphethini esimnandi. izithombe Indwangu kufanele alingane, kodwa wesimethri esiqinile uhlanganyela ukugcina akudingekile - bangathumela hang out ngendlela kunezinxushunxushu.
Omunye umqondo omuhle endaweni yengcebo "indlela ukuhlobisa udonga egumbini" - ukudalwa mikhiqizo yakhiwe of amaduku. Bright, izithombe egqamile scarves uzobe aesthetically ehlotshisiwe egumbini lokuphumula, lokulala, nursery, ukuhlonishwa okwakhe yayo.
Kodwa mhlawumbe decor lebanti ngeke imifekethiso. Ikhono embroider wena ezandleni - wobuciko Handstitched uyonika ingaphakathi ukubukeka ahlukile, yemvelo, ukunethezeka ezingabizi futhi Chic.
Indlela ukuhlobisa udonga izithombe
Design indlela usebenzisa izithombe umndeni Kuye wayekwenza isikhathi eside, kodwa kuze kube manje kubhekwe imfashini kanye yasekuqaleni. Amagumbi, ehlotshiswe izithombe omnyama nomhlophe nombala agcwele umoya ezikhethekile wenduduzo, izihambi nento endala. Ngesikhathi esifanayo nibekezelelana izingcingo zabo ngobuciko.
Izithombe usayizi imigqa izindonga uyobheka buthuntu futhi ezicindezelayo, lapho indlela yokwakheka izithombe ngesimo izibalo ezithakazelisayo uyonika ukuphi ingaphakathi. Isithombe kungenziwa ihlukaniswe izigaba: egumbini lokuphumula ukuze uhlanganyele izithombe umndeni ekamelweni - iholide, ingane - isithombe amalungu omndeni omncane.
Ngaphambi ukuhlobisa udonga izithombe, zama ukusebenzisa ozimele - zingenziwa Amagobolondo, izinkinobho, ubuhlalu. Homemade Uhlaka ingaphakathi izokwengeza isikhalazo nakakhulu.
Izitika - othengiwe okuzenzela - indlela elula "ingubo" izindonga elingenalutho. Ngosizo ezimibalabala vinyl stickers ezindongeni, ungadlala wonke izingcezu empilweni yemvelo, amabhayisikobho kanye opopayi. Futhi uma Thenga ephepheni okunamathelayo, isikelo ipensela, kungenzeka ukudala into yabo - ukuncibilikisa izimbali iphepha, uwafake izimvemvane futhi eqhwa hang ebusika futhi imifanekiso Santa Claus.
Enye indlela yokuqala ezibonisa indlela ukuhlobisa udonga egumbini lokuphumula, lokulala noma nursery - imbangela esemathuneni akudala, imidwebo, imidwebo. Lolu hlobo umhlobiso lalaziwa Ephakathi, ukukhuluma isici abaqhoshayo Baroque futhi Rococo imisinga. imidwebo yobuciko ehlanganiswa ezindongeni amahholo esigodlweni futhi amafulethi wasebukhosini. Fashion ifinyelele ngisho nanamuhla, futhi namuhla umhlobiso art izindonga asetshenziswa njengoba izindlela zokusebenzisa eqoshiwe yasendulo, futhi ukusika-onqenqemeni, kodwa akukho ayisasebenzi.
Cover izindonga bomdabu umdwebo omuhle Kodwa ungakwazi kube kwayona, esimweni esinjalo, uma wazi kanjani ukudweba. Oku-camera nge ngengqondo ngendwangu yamathebhu kanye primer, siqale ukudala, recreating isithombe noma indaba acrylics. Ukuze ukumosha angaphakathi 'daubs "akufanele ngokomsebenzi engiwenzayo phambi ukuhlobisa udonga egumbini ngobuciko buciko, dweba okokudwebela yesithombe esizayo, okuyinto ayikuvumeli ukuba fufutheka dlela yobuciko.
Ngisho noma uhlobo uye bancishwa wena ithalenta umculi, futhi hit embonweni ukumboza izindonga ngemigwalo nofana ngesiketjhi elilotshwe ukuthi kungaba kahle ngaphandle izinkonzo umklami. Siza wena stencil ezivamile, ezidayiswa nganoma iyiphi esitolo "ekhoneni" in ezahlukene futhi awalingani kanye izitayela. Ayevame ilula - ukudala sibalo eziyinkimbinkimbi akusho Nokho, "ukudweba" elingaphakathi oluyingqayizivele ngempela iphumelele.
Ukusebenzisa kwabo ilula: unamathisele stencil odongeni, ukukulungisa nge tape bese udweba kuqala ipensela bese ezinemibala upende. Inkinga, njengoba kahle ukuhlobisa odongeni, yaxazululeka! Kodwa ngaphambi kokuba siqalise ukuthenga ewusizo, anqume ngesakhiwo, isitayela kanye umbala Palette yesithombe. Ngemva Umdwebo kumelwe ukuhlanganisa ngokuvumelanayo ku umqondo jikelele wezangaphakathi, hhayi ukuwuchitha. Ngokwesibonelo, funny animal izithombe kungafaneleka ekuklanyweni nursery, kuyilapho izimbali futhi ayekhulekela igcwaliswe yokubhaliswa egumbini lokuphumula ngempumelelo. Yasezindongeni ngaphandle umsebenzi zokuhlobisa ihambisana kungenzeka zibukeke ukwandisa noma ukunciphisa isikhala, ngakho uma sisebenzisa cabanga nobukhulu balezi egumbini.
umqondo Landelayo mayelana nendlela ukuhlobisa izindonga ngezandla zakhe, uyokhanga abantu abaningi, njengoba nje esibukweni kwadingeka kwezinhlelo nokuqaliswa kwalo. Nge efanele, leli lungu ebalulekile yimuphi design ingaphakathi uzokwenza egumbini enhle futhi original. Okubalulekile wukuthi usebenzise i thatha uhlaka engajwayelekile ke. Lokhu kungaba inketho ngesitayela vintage ezenziwe ngokjuni, luhlaka ezivamile, anamatheliswe nge sequins, amatshe, amagobolondo, embozwe upende acrylic noma lacquer ezinemibala. A Isibuko esikhulu luhlaka engavamile uyonika ingaphakathi egumbini lokuphumula noma lokulala kanye sekugcineni ukunethezeka isibuko esincane e esikhanyayo Uhlaka design izokuvuselela lezingane. Into esemqoka nalokhu - Ungeqisi it ne isibalo izibuko, kungenjalo egumbini iphenduke ezomile izimpahla esitolo.
Nge labo ukhathazekile kakhulu mayelana umbuzo indlela ukuhlobisa odongeni izithombe iphepha ikholaji, sizokwabelana omunye imfihlo. Isihloko Beautiful ezenziwe ngesandla, ogxile izithombe ezibaziweyo, nezithombe, ngifaka, ethe njo ngendwangu noma iphepha, kubukeka umxhwele kakhulu. Yamaphephandaba kusuka amaphephandaba, omagazini, ngifaka, zikhathi ethumba ikhamera, izimbali elikhanyayo, izimvemvane zigxilé amakhadibhodi amapuleti esikhulu ebiyelwe ozimele. Kubalulekile ukuba overdo it oluxube ikholaji ungene isithombe mazombe seragelo wezangaphakathi.
Indlela ukuhlobisa udonga ekhishini
Ekhishini Akudingi amaqhinga ezikhethekile. Izindonga kanye nezinye amakamelo, kungenzeka ukumboza imidwebo mnandi izithelo, izigcawu zemvelo, imibhalo eqoshiwe enhle eyenziwe usebenzisa ama-stencil. Kuyobukeka original kakhulu KaMose umhlobiso kabhontshisi wekhofi. Kugcine usethe sisobala: ku endwangwini noma iphepha lokunamathisela odongeni, ukudweba isithombe, ikhava impahla kanye glue kanye imizila nentaba, unamathisele okusanhlamvu ikhofi. Dove wobuciko ukuze ome, buyela efulemini futhi hang etafuleni lasekhishini.
Nanti elinye icebiso sendlela ukuhlobisa udonga ekhishini, Uma unganakile kungase kubonakale kuyinkimbinkimbi, kodwa uqaphele kulula ngokwanele. usimende okuhlobisa uyokwenza design ekhishini ngefomethi ngobuningi, siphakamise izesekeli ukudala ezihlukahlukene ukwakheka. Kungaba letifanelekile imibono ephathelene nanoma yimuphi elingaphakathi, ngaphandle zako sobala - kalula isicelo, sobuhle bayo futhi ihlala isikhathi eside.
Njengoba ubona, uma kukhona ngisho lamaphupho izinto ezivamile futhi izindlela ngokurhaba, ungakha umbukwane, design ababezibheka, okuyilona elisebenzayo futhi ngaphandle kokubandlululwa esikhwameni. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukuhlobisa udonga ngezandla zabo ngokushesha futhi kalula, futhi ngenxa yalokho, ekwakhiweni isidleke salo - I-awuseyona inkinga.
Umklamo yesimanje efulethini. Modern Isakhiwo sakudala ezindlini
Efulethini elincane kungenzeka ukuhlela yesimanje futhi stylish
Nweba Uphahla lwangaphakathi ku uVladimir. Amanothi Okudala gager.
Igumbi izingane nabesifazane ezahlukene: yesithombe nezinketho design
Amakhemikhali afanelekayo nokuqothulwa kwabasebekhulile
Ukubeka up a gearshift ngesithuthuthu. Speed ngebhayisikili
Yini esetshenziswa leWebhu
Calla - izimbali sokufa? Cha, lokhu kuyinto njengentelezi enamandla!
Ikhekhe "Sun" - lula futhi okumnandi
Yini okungukuthi nokudoswa? ukucabanga deductive
Keylogger: ukuthi kuyini, ngenhloso ukusetshenziswa, indlela yokuvikela ngokumelene nalo. keylogger
Strudel ne cherry: iresiphi ekubalekeni